Alaskan Klee Kai Dog Breed - Eziokwu na alitydị Mmadụ - Reeddịrị
Alaskan Klee Kai Dog Breed - Eziokwu na alitydị Mmadụ
Azụpụtara Klee Kai site na Siberia na Alaskan Huskies, yana enyemaka nke Schipperke na American Eskimo iji gbadata na-enweghị ịba ụba. Dị ka nke a, ị ga-ahụ otu njirimara ahụ dị na huskies.
Ha na-achọ ịmata ihe, na-achọsi ike, na-agbasi ike maka oke ha, ndị aghụghọ na ndị mgbapụ mgbapụ. Klee Kai bụ nkịta dị ike; Otú ọ dị, ọ bụghị obere nkịta 'hyper'. Ha mara mma ma dị mpako.
Aha 'Klee Kai' sitere n'okwu Eskimo nke pụtara 'obere nkịta'. E nwere ihe ruru 500 nkịta ndị a adị n'ụwa.
Nlekọta na Ọzụzụ
Klee Kai National kennel Club na Nnapụta
Enwere ihe mberede na mberede na Oklahoma n'etiti -70s. Linda Spurlin, onye mepụtara ụdị Klee Kai ahụ hụrụ obere nkịta a nke yiri Husky wee chee na nke a ga-abụ nkịta zuru oke zuru oke.
N'otu oge ahụ, nwanne ya nwoke na Alaska chọtara otu nkịta ahụ ma chee na ọ bụ obere nkịta zuru oke. Ya mere, ha malitere ime ka ozuzu ahihia. Mgbe e mesịrị, Linda gara n'ihu n'onwe ya mgbe ọ zụrụ nwanne ya nwoke ma nke a bụ mgbe ezigbo ihe ịga nke ọma malitere.
Ọ nọrọ afọ ndị mbụ ahụ na enweghị nloghachi ọ bụla na itinye ego ya, na-ahụ ụmụ obere ihe ndị o kere eke n'anya. O nwere oge siri ike na afọ ọrụ ọ ga-etinye ego. Ọ rere nkịta mbụ ya maka nzube nke ịzụlite na Disemba 1988.
Uwe na ejiji
Klee Kai, dị ka Siberia Husky, dịtụ mfe ilekọta. Ha dị oke ọcha. Ọtụtụ anaghị amasị ụkwụ mmiri ma ha ga-eji ọtụtụ awa na-edozi onwe ha kwa ụbọchị.
Ha enweghị “ísì ụtọ nke nkịta,” ha enweghịkwa “ume iku ume.” Ọtụtụ Klee Kai agaghị achọkarị ịsa ahụ.
Dị ka ọ dị na Alaskan Husky na ndị Siberia, n'adịghị ka nkịta dị mkpụmkpụ nke na-awụfu afọ niile, Klee Kai na-afụkwa uwe ha ugboro abụọ n'afọ. N'ezie, nha nke nkịta na-ejedebe oke nke ajị anụ na-afụ; n'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka dị egwu.
Ọ kachasị mma idozi nkịta ahụ na oge a. Offọdụ n'ime ụmụ nkịta toro ogologo nwere ike ịmakọ ma ọ bụrụ na edozighị ha. Imirikiti Klee Kai ga - enyere ntutu aka aka site na ịpị ihe dị ka ngere.
Ndị ọzọ karịa oge a nke ịfụ uwe, Klee Kai nwere oke onwe ya. Ekwesịrị ịme usoro mgbochi mgbochi, dịka ịmịcha mbọ, ịkwa mma nkịtị n'ụdị nchacha. Usoro a dị mkpa karịsịa na usoro njikọta.
Klee Kai n'ụlọ gị pụtara na ịnọghị naanị gị. Ha na-eme gị ọchị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọghị ya ma nwee ike dajụọ obi mgbawa maka ihe kpatara ya.
Ha ghọrọ akụkụ dị oke mkpa nke ezinụlọ na-ahọrọ ikuchi otu. Ha na-anọkarị n'ebe dị anya ma a bịa na ndị bịara abịa ma nwee uche nke ha.
Nke a bụ nnọọ nkịta nwere ọgụgụ isi. Ahụla m nkịta nwoke mgbe ọ na-akwazi eriri njikọ agbụ iji gakwuru nwanyị n'akụkụ ya. Ahụrụ m nwanyị ka ọ dọtara ogige ahụ ka nwoke wee nwee ike piakota n'okpuru ogige ahụ.
Ọ na-atọ ha ụtọ ịnọnyere ndị ha. Ọ bụrụ na etinye ha n'ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma nye ha, ha ga-ahụ ụzọ ha ga-esi pụọ.
N'adịghị ka Siberia Husky, Klee Kai bụ onye na-enyo enyo ma na-enyo ndị bịara abịa enyo. Ha na-eme ọmarịcha nche. Ha ga-eme ka ị mata mgbe mmadụ nọ gburugburu na ọ na-esikarị ike na-egbughị ihe ọ bụla.
Ekwenyesiri m ike na ha ga-enye ndụ ha ichebe ndị ha hụrụ n'anya. Ọ dịghị amasị Klee Kai ka emere ya ka ihe egwuregwu ụmụaka. Ha chọrọ ka a na-akwanyere ha ùgwù. Ebe ọ bụ na ụmụaka nwere ike ime ihe masịrị ha mgbe ụfọdụ, naanị ụmụaka maara etu esi emeso anụmanụ bụ ndị ha họọrọ.
Nkịta ndị a na-abụ obere nkịta na-eme ihe ike ma ọ bụrụ na ha anaghị emekọrịta ihe nke ọma. Site na nke a, m na-ekwu na Klee Kai nwere ike ịmasị nkịta ndị ọbịa ma ọ bụrụhaala na onye bịara abịa nwere ezi ebumnuche. Klee Kai na-enwe obi ike na gburugburu nkịta dị iche ma ọ ga-alọghachi n'ụdị ọ bụla nke ịkpa ike.
Ahụ erughị ala Klee Kai mgbe nna ya ukwu na-anọghị ya. Ha ga-achọ ka ya na ya soro ya mee njem ma ọ dị mfe. Ihe osise Klee Kai agaghị ezu oke na-egosighi ịhụnanya ya na oke ịhụnanya ya maka nna ya ukwu na ndị otu ezinụlọ.
Klee Kai bụ ndị dinta. Ọ bụrụ na ebulitere ma ọ bụ webata ya n'ụzọ ziri ezi, Klee Kai nwere ike ibi na nwamba na ezinụlọ ya na nnụnụ. N'ezie, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya onye nwe ya ka ọ ghara ịhapụ nnụnụ na-agba agba n'ụlọ, ma ọ bụ ịhapụ Klee Kai na-anọghị n'ime ụlọ nwere ahịhịa, hamsters, wdg.
Ebumnuche nke ịchụ nta ha dị oke egwu ma amaara ha iri nri ha. Ozugbo m nwere gerbil na-agbagharị n'otu n'ime bọọlụ ndị ahụ doro anya, Klee Kai nọ n'ime ụlọ m nọ na ekwentị.
Anụrụ m ka nkịta na-akụ bọl gburugburu ma na-eche na gerbil dị mma. Ọzọ ihe m ma, nwa nwa nwa m bịara n’ụlọ na-ebe ákwá na Sitka na-eri nri. Nke ahụ bụ gerbil ikpeazụ n'ụlọ anyị.
Enweela m otu n'ime ndị na-arị m ugwu n'elu ngị nnụnụ nke na-atụkwasị na nkwụnye. Nanị ihe ọ rịgooro na tebụl ma wụlie elu n'ụlọ ahụ.
Enweela m ọtụtụ Klee Kai na ụlọ ndị nwamba dị, enwerela m nwa nọọsụ dam gbapụrụ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ndị na-apụghị ịtụkwasị obi. Ana m amakarị nkịta ndị ahụ tupu ha apụ n'ụlọ m.
Inggba Mkparịta ụka, ikwu okwu, na mkpu
Dika ekwuru n’elu, Klee Kai abughi ihe eji egwu egwu. Ha na-ekwukwu okwu okwu na mgbe ụfọdụ na-echetara ndị nwe ha banyere ibi na-eto eto. Ndị Klee Kai hụrụ n'anya nwere okwu ikpeazụ, ọbụlagodi na ha na-erube isi n'iwu nke ha na-eme mkpesa.
Klee Kai bụ puckish dị ka Husky. Dịka, ị nwere ike ịchọta ụlọ mkpọtụ nke Klee Kai na-abụkọ ọnụ n'isi ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị mgbe coyotes dị nso. Ha na-ebido ma kwụsị iti mkpu dịka achọrọ ha. Ha na-abụkarị ndị mmụọ.
Ha maara mgbe oge nri bụ, ọbụlagodi na nke a abụghị mmemme emere. Ha nwere ike ịchọpụta mgbe ihe na-adịghị mma ọbụlagodi mgbe ewepụrụ ha n'ezinụlọ dịka ọ dị na ụlọ.
Achọpụtara m na ụdị a na-eme nke ọma na nri gụnyere ọkụkọ na osikapa. Ha chọrọ nri nri. Enweghị nri nkịta dị ọnụ ala maka ha. Akara aha ọma kacha mma. Ha choro mmanu buru ibu iji nye ume ha.
Klee Kai bụ onye na-elekọta mmadụ. Mgbe a zụlitere ha n'ọhịa, ha na-erikarị nri mgbe a na-elekọta ha mana ha na-enweta nnukwu ibu mgbe ha na ezinụlọ ha nọ n'ụlọ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ kachasị mma inye ụmụ nkịta nri na oge iji kwado “ọzụzụ ite”. Nwa nkịta kwesịrị ịzụ ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'ụbọchị. Enwere ike inye ndị okenye nri otu ugboro kwa ụbọchị.
Imirikiti ndị nwere Klee Kai ga-azụ onwe ha ozugbo enwere nkịta. Ha anaghị 'egbutu' ma bụrụ ndị na-erikọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ihi nke a, ha adịkarịghị ebuli ibu gabiga ókè. Nkịta ndị a hụrụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị ka peas, ọka, piich, unere, ghee fry, na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ.
Klee Kai bụ nkịta ezinụlọ. Ha nwere ike ịnagide oyi dịka eziokwu ahụ bụ na ha mepụtara na Alaska. Typicallọ ha na-adịkarị n'ebe ahụ bụ ụlọ nkịta jupụtara na ahịhịa.
Kaosiladị, ha kacha nwee obi anụrị n’ebe ndị ha nọ. Ọnụ ụzọ Doggie dị mma maka nkịta ndị a. Ha na-enwe mmasị ịbịanye na ndị ha oge ụfọdụ. Ha dị ezigbo mma na obere ụmụaka na ọbụna ụmụ ọhụrụ.
Enweela akụkọ banyere Klee Kai na-ele nwa nọ n'ụlọ ahụ wee pụọ ịkpọrọ nne na nna ahụ mgbe nwa ahụ bere akwa. Enweela mmiri mmiri na-enye ụmụ ara ara.
Fences agaghị ejide Klee Kai na-enweghị obi ụtọ. Imirikiti Klee Kai nke ndị ezinụlọ ha laghachirila site n'ụlọ nke mechara kewaa. Ha na-enwe mmetụta dị oke nhịahụ na enweghị mmasị na ya.
Ha ga-ahapụ ụlọ ebe a ga-edebe ha na mbara èzí ahụ n’enweghị nleta ọ bụla n’ụlọ ịnọnyere ezinụlọ ha. Ha di nfe ma obu ulo eji azuru azu; agbanyeghị, akpọchila ha n’ime ụlọ. A rụrụ mgbidi na ogige ịgafe, n'okpuru ma ọ bụ site na ya.
Dị ka ọ dị na Siberia Husky, ogige a gbara ogige dị mkpa maka nkịta dị n'èzí. Nsu kwesịrị ịdị ike na 6 ụkwụ ogologo. E kwesịrị ịbụ waya na ala igbochi-egwu ala.
Klee Kai nwere mmasị igwu ebe; ya mere, ọ ga-abụ ihe dị mma inwe mpaghara ga-ekwe ka ọrụ a na-ebibi ogige niile. Dị ka ọ dị na nkịta niile, ebe a na-anụ nkụ bụ ihe na-achọsi ike maka nkịta nwere omume ịgbanahụ.
Ekwesịrị iji ebe a na-etinye ihe mkpuchi mee nke njikọ ígwè, gafee akwa mpe akwa. Ogige ahụ kwesịrị ịdị mita isii n’ogologo ma kpuchie ebe Klee Kai bụ ndị na-arị elu. Ha ga-achọ ụlọ nkịta mana ha ga-etinye oge ha niile na-etinye onwe ha n'ụlọ elu ụlọ.
Ha na-enwe mmasị ịbụ “Eze Ugwu” wee họrọ mgbe kachasị elu nke ọ bụla nwere ohere.
Ọ bụ ezie na nkịta a sitere na Alaskan Husky na ndị Siberi, ha na-abụ ezigbo nkịta nrube isi. Ha mara oke nma ma choro ime ndi nwe ha obi uto.
Nchikota a na - ebute nkita nke puru imuta ihe obula. Kwesịrị ịmalite nrubeisi n'oge. Mepụta iwu ma rapara na ha. Mee ka Klee Kai mara na ị bụ onye isi.
Ekwela ka nkịta gị mee ihe dị ka nkịta na ị chọghị ka ya mee ka okenye. Ọ bụrụ na ị na-ekweta ọfụma ọbụna otu ugboro, ị kwadoro na e mere iwu ka emebi.
Ozugbo ị kụziiri nkịta gị ịrụ otu omume, na-atụ anya ka ọ mee ya oge niile, yabụ ekwela ka ọ mee ihe ọ bụla ị chọghị ka ọ mee n'ihi na ọ ga-esi ike imebi ọzụzụ ahụ.
Klee Kai bụ ndị gbakwasara ụkwụ; ya mere, ị ga- enwerịrị onwe gị dị ka onye ndu mkpọ. Ọ dịghị mkpa ịme mpịakọta alpha nke a na-ekwukarị. Naanị ị ga-akpali nsọpụrụ, ọ bụghị imegbu nkịta ka ị doo onwe gị n'okpuru.
Tactzọ aghụghọ ahụ nwere ike ime ka nkịta na-ewe iwe, na-enweghịkwa amụma. Na-akwanyere nkịta gị ùgwù ma na-atụ anya otu ihe ahụ. Ọ bụrụ n ’ịzụ nwa nkịta gị n’ụzọ ziri ezi ọ ga - esoro gị ebe ọ bụla.
Na usoro ahụ, klaasị ọzụzụ abụghị naanị ịkụziri nwa nkita ka ọ na-emekọ ihe ma zaghachi gị ọbụlagodi na ihe ndọpụ uche, mana ọ na-akụzikwara gị na ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ iwu ziri ezi iji mee yana otu ị ga-esi mee ka nwa gị zaghachi. Nkwenye dị oke mkpa na klaasị ọzụzụ na-enye ezinụlọ ebe ha na-eme omume na onye dịnụ iji kwalite usoro ọzụzụ ziri ezi.
Oge ọzụzụ a bụkwa ihe jikọrọ ha. Will ga - achọpụta na Klee Kai gị chọrọ ka ọ kacha mma n’ihe niile. Aghụghọ nke nkịta a zụrụ nke ọma na-azụlite àgwà ọma, ịmalite. Ozugbo akparamagwa ịchọrọ b ghọrọ agwa, nkịta anaghịzi emebi iwu ahụ.
Ikike maka nkịta ndị a bụ nnukwu nsogbu. Naanị ihe ha ga - eme bụ ilele nkịta ọzọ na - arụ ọrụ n’elu A ma ọ bụ n’elu mmiri, ha ga - eso ya n’enweghị ntụzịaka mmadụ. Nke a bụ ụdị ọzụzụ nke na-atọ ụtọ ma na-arụpụta ihe. Ma onye nwe ya ma nkịta ya na-enwe obi ụtọ ịmụ ihe na ịgbaso iwu.
Ga - ahụ na ịmanye nkịta gị bụ ụzọ kachasị mma iji gbochie ya / ike gwụ ya na nsogbu.
Ihe kachasị njọ ị nwere ike ime bụ imebi obere nkịta ndị a dị oké ọnụ ahịa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enweta otu n’ime nkịta ndị a ma were ha ka “nwa” ha. Nkịta anaghị aghọta ọrụ ha ma ọ bụrụ na o kwesịrị ịbụ nwa gị.
Nkịta ya ma mara naanị otu esi abụ otu. Mgbe etinyere n'ụdị ọnọdụ a, nkịta gị nwere ike ịdị na-akpachapụ anya, na-eme ihe ike ma n'ozuzu ya adịghị mma ịnọrọ.
Nkịta ndị a abụwo n'ụzọ dị ịrịba ama nke enweghị nsogbu mkpụrụ ndụ ihe nketa. Anyị na-ekwe ka ndị na-azụ anụ siri ike zụta nkịta ndị na-anaghị eche eche. A na-ere ụmụ nkịta niile na nkwekọrịta spay / neuter contracts, ngalaba-nwe ma ọ bụ ndị ezigbo ọzụzụ.
Ekwenyere m na nke a bụ ihe kpatara enweghị ntụpọ. Anyị enweela agba agba mgbe ụfọdụ, cryptorchidism na n’oge gara aga enweela nkịta nke na-amịrị ezé ụmụaka amịghị nke na-apụtaghị. E nwee nkịta ndị biri ndụ mgbe ha kwesịrị ịnwụ anwụ. Ha bụ nkịta siri ike nke ukwuu.
Mgbe ụfọdụ ihere nwere ike ịbụ nsogbu: nne na nna kwesịrị ịdị na-apụ apụ ma na-eme enyi ma na-egosipụtaghị ihere ma ọ bụ ụjọ (ịghara imehie na enweghị mmasị).
A ghaghị itinye nlezianya anya na patella. Ọ dị mfe ịzụlite patellas luxating na obere nkịta, ya mere, a ga-enyerịrị nlekọta maka ohere ndị dị na ngwaahịa ozuzu anyị. I kwesiri inyocha na nwa akwukwo ọ bụla ị na-atụle ka ndị mụrụ ya kpuchitere nne na nna ya maka patellas mara mma.
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-akpachara anya, ma maka nke a, Klee Kai bụ ezigbo nsogbu enweghị nsogbu n'ịgwọ ọrịa.
Olee otú ha si mee ka ha pere mpe?
Mgbe ụdị a bidoro, anyị kwenyere na ejiri Schipperke na American Husky weta oke Siberia na Alaskan Husky.
Nwere ike ị nweta Klee Kai nwere anya na-acha anụnụ anụnụ?
Ee, Klee Kai nwere ike inwe anya acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ abụọ. Ha nwekwara ike nwee anya nke naanị otu acha anụnụ anụnụ na akụkụ nke ọzọ aja aja. Na Siberia a na-akpọ nke a 'anya pinto', 'anya parti', ma ọ bụ 'anya anya.'
Enweghị ihe ọ bụla dị njọ na anya: nkịta nwere ike ịhụ nke ọma. Nke a bụ àgwà a na-ahụkarị na Siberia Husky na na Klee Kai.
Imirikiti obere nkịta na-enwe obi ụtọ na ọbara, olee otú ọnọdụ Klee Kai dị?
Klee Kai nwere nnukwu nkịta nkịta. N’oge ufodu anyi na enweta nkpu nkpu ma obu oku dika m si kpo ya. A na-echekwa ụda a maka mkpu. Klee Kai bụ nkịta na-arụsi ọrụ ike, mana ọ bụghị hyper. Ha bụ impish na okike.
Ha ga-edebe ndị nwe ha na mkpịsị ụkwụ ha. A kọọrọ na otu nkịta nwere ike ịbanye na efere efere ebe ebe ezoro ezo. Ha dị ka ịnwe afọ 2 maka ndụ.
Kedu ka Klee Kai si kwụrụ oyi?
Ebe ọ bụ na e mepụtara ụdị ahụ na Alaska, ha siri ike ma na-anabata oyi. N'ime snow, ha ga-agbanwe nke ọzọ dị n'ala, wee belata ohere nke ntu oyi.
Will ga-achọpụta na Klee Kai bụ mkpuchi abụọ. Grey na ọcha Klee Kai ga-enwe uwe ọcha. Nwa ojii na ọcha Klee Kai ga-enwe uwe ọcha. Wolf isi awọ na ọcha Klee Kai ga-enwe uwe awọ.
Uhie na-acha ọcha na-acha ọcha Klee Kai ga-enwe uwe ọcha. N'okpuru dị mkpa maka nchebe pụọ na oyi na okpomọkụ. Isi ntutu dị ogologo na-echebe Klee Kai site na mmiri. Ugboro abụọ n’afọ ahụ, Klee Kai ga-awụkwa ya n’ime mkpuchi ya n’ime izu abụọ na atọ.
Ebi m na Mexico, kedu ka Klee Kai ga esi eme ihu igwe?
Klee Kai dị ka nkịta ndị ọzọ chọrọ ọtụtụ mmiri na ndò n'oge ọkọchị. Ebe igwu mmiri nke nwatakiri bu uzo di nma nke nkita ji di oyi. Idebe nkịta n'ime ụgbọ ala, igbe ma ọ bụ ogige ọ bụla n'oge okpomọkụ nwere ike ibute ike ọgwụgwụ.
Na-enweghị mgbasa ikuku, nkịta nke aka ya nwere ike ịdị oke. Dị ka nkịta ọ bụla ọzọ, emela ka nkịta ahụ dị ọkụ site n'ịgba ume ka ị na-emega ahụ gabiga ókè n'oge okpomọkụ nke ụbọchị.
Klee Kai nwere mmasị iri nri ice, ma nwee ekele maka ya n'oge ọkọchị. Klee Kai ga-awụpụ uwe ya tupu oge ọkọchị ma ọ dịghị mkpa ka agba ya. Nke a adịghị mkpa ma na-akụda mmụọ.
Ezi uche kwesịrị imeri, etinyela nkịta gị n'ọnọdụ nke gị onwe gị na-agaghị anabata.
Kedu ka ha na ụmụaka nwere?
Klee Kai hụrụ ụmụaka n'anya ma soro ha mee ihe ọ bụla ma ọ bụrụhaala na a kụziiri nwatakịrị ahụ ịkwanyere nkịta ùgwù ma ghara ịkwa ya emo. Nkịta ndị a pere mpe nke na nwatakịrị anaghị achịkwa achịkwa nwere ike bụrụ nnukwu ihe iyi egwu.
Ọtụtụ Klee Kai ga-enye nwatakịrị ohere ọpụpụ zuru ezu nke na nwatakịrị ahụ nwere ike imebi nnukwu ihe tupu nkịta agbaa ọsọ. Ezigbo ndị nwe na-eme nkịta dị mma. O yiri ka ha nwere echiche nke isii a banyere ebumnuche nwatakịrị ma ọ ga-ezerekarị nwatakịrị ebumnuche ọjọọ.
Yard ahụ zuru oke maka Klee Kai?
Ee, ọ bụ ezie na ha chọrọ ọtụtụ mmega ahụ, ha ga-eme nke a na mbara ezi mara mma. Y'oburu na kariri otu nkita, ha g'achu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha ga-achụ nnụnụ ma ọ bụ nnụnụ na-ese onyinyo, igurube, agwọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ka a ga-achụ.
Enwere ike idobe ha n'ime ụlọ, a na-azụ ha ka ha nwee nnukwu huskies ma ọ bụrụ na onye nwe ya ga-ejegharị na nkịta ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'ụbọchị.
Hà na-awụfu ọtụtụ?
Ee, ha na-awụfu ugboro abụọ n'afọ. Ha na-afụ uwe ha n'oge ọ bụla ma na-achọ ọtụtụ nchacha n'oge a. N'ezie, mgbe ị na-ele anya na nkịta 10 ruo 20, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntutu dị ka husky buru ibu.
Enwere m ihe nfụkasị na nkịta ndị a adịghị eme ka ha ka njọ, ya mere ụfọdụ ndị na-arịa nkịta na-enwe ike ịnagide ndị a, ikekwe n'ihi na ha bụ nkịta dị ọcha dị otú ahụ.
Kedu ka ha na nkịta ndị ọzọ dị?
Ọtụtụ, ọ bụghị ha niile, Klee Kai na-eme ihe ike megide nkịta ndị ọzọ ọ gwụla ma ha na-akpakọrịta nke ọma dị ka ụmụ nkịta. Nkịta ndị a ga-ahọrọ njirimara nke nkịta okenye ma ọ bụrụ na ebulitere ya na otu.
Kedu ka ha si pere aka?
Ogologo Klee Kai dị n'etiti 10 na 20 pound, na 12 na 15 sentimita asatọ.
Kedu onye na-ekwesịghị inwe Klee Kai?
Onye ọ bụla chọrọ imeso nkịta ya dị ka nwa ya na-ajụ maka nsogbu. Onye ọ bụla nke na - enweghị ike iguzoro ntutu ekwesịghị inwe Klee Kai. Onye ọ bụla nke na-enweghị ike iguzo nkịta nkịta n’ezie achọghị Klee Kai.
Onye ọ bụla nke na-enweghị ike ịdị n'otu ekwesịghị ịnwe Klee Kai. Onye ọ bụla nke na-achọghị ịdọrọ uche gaa na onwe ya n'ihi na onye ọ bụla nke hụrụ Klee Kai chọrọ ịma ihe ọ bụ, ebe ha nwere ike inweta otu na ego ole ha na-eri maọbụ onye ọ bụla chọrọ akara ọkwa.
Ndi AKC ghotara ahihia a?
Anyị etinyela akwụkwọ maka mmata AKC ma na-eche nzaghachi n'oge a. Anyị enweela ọtụtụ ndị chọrọ ịzụlite Klee Kai, ndị chọkwara inwe ike igosi nkịta anyị, yabụ ngwa ahụ.
Anyị na-elekwa ụfọdụ ndị nọ na mba ndị ọzọ anya itinye aka na ụdị ahụ mana ha enweghị ike iji ebe ọ bụla ọzọ ewezuga AKC na FIC iji gosi nkịta ha. Iji nye ọnọdụ kachasị mma maka ndị mmadụ n'ụwa niile, echere m na ọ bụ maka ọdịmma anyị kachasị mma isonye na American kennel Club.
Klee Kai National Kennel Club ga-achọ nkịta niile ka ha gafee ụkpụrụ ndị dị ugbu a ka e wee debanye aha ha dị ka àgwà ozuzu ma ọ bụ gosi nkịta dị mma.
Emegoro Klee Kai National Kennel Club na Ọgọstụ nke 1995. Nke a bụ oge izizi ịtụ vootu na iwu iwu. N'oge a, klọb na-ezukọ eze otu ugboro n'afọ na Klee Kai Picnic.
Ejikọtara nzukọ na picnic ahụ. Anyị nwere ọtụtụ ndị otu na USA. Echere m na n'ọdịnihu, m ga-achọ ịhazi nzukọ mba na Intanet.
N'oge a, ụdị a dị ọhụrụ nke na ọ nweghị akwụkwọ ekesara gbasara Klee Kai. Kasị nso ị ga - enweta bụ inweta akwụkwọ Siberia Husky. Ihe ụfọdụ dị iche, mana imirikiti ihe ị gụrụ gbasara ha ga-abụ eziokwu na Klee Kai.
Klee Kai anaghị agbapụ ezigbo ụlọ ma ha anaghị ehie ụzọ dị ka ndị enyi.
Standardkpụrụ ụdị ahụ bụ uzommeputa, ọ bụrụ na ịchọrọ, maka ihe atụ zuru oke nke ụdị ahụ. Kpụrụ a bụ ụgbọ eji eme ihe iji kpee nkịta niile nke ụdị ahụ ikpe. Ezigbo ndị na-azụ ihe na-agba mbọ ịbịaru nso zuru oke dịka o kwere mee.
Nzube mbụ: Emepụtara Klee Kai dịka onye nkịta bụ Linda Spurlin.
History of ọmụmụ: Nkịta ndị a si na Siberia na Alaskan Huskies zụlite.
Akụkọ mbu: N'etiti 1970
Mba Onye si: United States of America, ọkachasị Wasilla, Alaska.
Klee Kai bụ obere nkịta ụlọ, na-adị mfe ma na-agbanye ụkwụ ya ma nwekwaa onwe ya ma na-arụ ọrụ. Ọdịdị ya dị nwayọọ, nke nwere ntutu dị mma, ntị kwụ ọtọ, na ọdụ yiri nkịta ọhịa na-atụ aro ọdịnala nke ugwu ya, dịka ọ dị na Siberia Husky.
Ọdịdị na ọdịdị ya na-egosipụta oke nketa ya nke nguzozi nke ike, ọsọ, na ntachi obi. Ulldọtụ bụ mmuo siri ike ma nwee ike ịme ya ọbụlagodi obere nkịta a.
N'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, Klee Kai nwere mọzụlụ siri ike nke ọma ma ọ naghị ebubiga ibu ókè.
Ihe nkpuchi ihu bụ njirimara pụrụ iche nke ụdị a ma ga-ahụ nke ọma n'ihi agba dị iche. Nchikota di iche iche nke akara nkpuchi nwere ike. Ihe nkpuchi zuru oke inwe agba di iche na isi, n'okpuru anya, imi na ichota ihu.
Ihe nkpuchi ụzọ atọ nwere otu ihe mana enweghị ụkọ n'okpuru anya. Ihe nkpuchi ọkara enweghị ụcha na anya, anya nke Di ya nwụrụ nke kachasị dị mma nwere naanị agba dị iche na isi na ịkpụzi ihu.
Mkpa ọkụ dị iche, akụkụ ihu ga-agbatị iji kpuchie ọkpụkpụ agba na ala iji kpuchie ebe dị n'okpuru agba. Ọ bụghị iwu, mana ọ bụ ihe na-achọsi ike ịnweta oghere ọkụ karịa anya. Ọ bụkwa iwu na ị ga-enwe oghere gbara ọchịchịrị n'etiti etiti ahụ.
A na-enye ọkụ ọkụ n'etiti etiti ọkpọiso ma ọ bụ muzzle. Ajị anụ dị n'ime ntị kwesịrị ịbụ otu agba dị iche iche dị ka nkpuchi ihu.
AJ DIS: Ekechi otu agba ahụ dum na-agbada n'imi, ma ọ bụ nwee obere agba agba dị iche na egbugbere ọnụ (dị ka nkpuchi nkịta ọhịa). Agba dị n'okpuru anya gbatịrị ihe karịrị ọkara nke ụzọ ruo na njedebe nke imi (dị ka nkpuchi nkịta ọhịa).
Agba dị n'okpuru anya gbatịrị ihe karịrị ọkara nke ụzọ ruo na njedebe nke imi (dị ka nkpuchi na-adịghị adị ma ọ bụ nke na-adịghị mma).
Dị elu na ibu ibu : A tụrụ ogo site na kpọnwụọ ruo n'ala. Klee Kai kwesịrị ịdị nha, ma ọ ga-apụta na ọ dị oke arọ ma ọ bụ na pere mpe.
Toy - ihe ruru 13 sentimita asatọ.
Miniature - Ihe karịrị sentimita iri na atọ ma ruo 15inches.
Ọkọlọtọ - Ihe karịrị 15 sentimita asatọ ruo na 17 sentimita asatọ.
Ojuju - Ihe karịrị 17 sentimita asatọ ruo na 18 sentimita asatọ.
Ọ bụrụ na ụdị a buru ibu na-atụkwasị nkịta buru ibu karịa ọkọlọtọ na-enye ohere, mgbe ahụ ọ ga-atụfu ọnọdụ ozuzu ya mana ọ bụghị igosi ọnọdụ ya. Ọ bụrụ na onye nwe ya mebiri mmachibido iwu nke puppy maka anụmanụ a, ọ ga-atụfu ọkwa ngosi ya.
Ibu ibu dị ka ịdị elu.
Ihe ndị a kpọtụrụ aha n'elu na-anọchi oke oke oke, na-enweghị mmasị na-enye ma oke oke.
AKW DISKWỌ : Nkịta na nkịta karịa 18 sentimita asatọ na nkụ.
Anya - almọnd yiri ma ọ bụ oval ka moderately gburugburu, moderately spaced. Nkwupụta okwu a dị oke mma, mana enyi na enyi, nwere mmasị na ọbụnadị ajọ omume, mepere ma saa mbara.
Anya Agba - nwere ike ịbụ agba aja aja ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ, a na-anakwere nke ọ bụla ma ọ bụ nke parti.
Emehie: Anya enịm kwa obliquely; setịpụrụ onwe gị nso, yabụ gbaa gburugburu iji yie ka ị na-ama jijiji.
Okpokoro isi - Nke obere na dị ka ahụ, ubé mechie n'elu ma tapering nwayọọ nwayọọ si widest n'ókè anya. Ọ kwesịrị tụọ elekere asatọ-na-ise na ọkara nke isi site na nkwụsị ruo occiput.
A ghaghị ịkọwa nkwụsị ahụ n'ụzọ doro anya ma ọ bụghị nke dị elu. Egbugbere ọnụ kwesịrị ịbụ ihe kwesịrị ekwesị n'elu ihe mkpa.
Emehie: Isi ntugheriukwu ma ọ bụ kwa arọ maka ahu hinting na dwarfism. Isi mmejọ bụ imi snow (pink streaked). Iri nri ma ọ bụ site na mkpirisi gafere bụ mmejọ.
AJ DIS: A imi ọ bụla zuru ezu agba ndị ọzọ karịa nwa ma ọ bụ chocolate na ihe banyere a red-ntekwasa nkịta.
Ekechi - Nke ọkara ogologo, ya bụ, ebe dị anya site na isi nke imi ruo nkwụsị bụ nha anya site na nkwụsị ruo occiput ma ọ bụ dịtụ obere dị ka atọ-asatọ nke isi. A na-akọwapụta nkwụsị nke ọma ma ekwupụtaghị ya, ọ ga-adaba n'ime okpokoro isi.
Akwa ahụ kwụ ọtọ site na nkwụsị ruo n'ọnụ. Ekechi bụ nke obosara, na-eji nwayọ nwayọ imi, yana ọnụ adịghị oke aka ma ọ bụ dị mkpụmkpụ ma akụkụ anọ. Egbugbere ọnụ na-acha nke ọma na nke kwesịrị ekwesị, ezé na-emechi na mkpa.
Emehie: Ekechi ọnụ ma oke nkọ ma ọ bụ oke sara mbara, kwa mkpụmkpụ ma ọ bụ ogologo, ezughi oke ma ọ bụ ndị a ma ama na-akwụsị; ogwu ọ bụla ọzọ karịa mkpa.
AH DIS: - Overshot ma ọ bụ undershot agha.
Imi - Black ma ọ bụ chocolate na nkịta uhie.
Ntị - Of ọkara ka ubé nnukwu size ma hà, triangular ke udi, nso kwesịrị ekwesị na ịtọ elu na isi. Ha siri ike, nwee ajị anụ nke ọma, dị ntakịrị azụ na azụ, ma kwadosie ike, yana ntụzigharị gbara gburugburu na-atụzi ọtọ ma dị ka nkịta ọhịa.
Ntị nke ntị kwesịrị ịbụ nke ziri ezi site n'etiti etiti na ọnụ dị n'ime anya ọ bụla.
Emehie: Ntị buru oke ibu dị ka isi, oke-set; adighi ike ikwuputa ma obu agba di iche ma obu na ozo karie agba di iche na aru ndi ozo.
AH DIS: Ntị ndị na-anaghị akwụsi ike.
A naghị ekwe ka ịwa ahụ ịchọ mma ma ọ bụrụ na enweghị ike iwepụ dewclaws.
Agba - A na - anabata agba niile site na oji ruo n’acha awọ, sable na ogo dịgasị iche, ma na-acha ọcha ọ bụla ma ọ bụrụhaala na nkịta abụghị albino. Nkịta niile na-acha ọcha ga-abụ ude na-acha ọcha ma ekweghị ka ha kpụkọọ na nkịta ọcha ọzọ.
Akara na akuku niile nke aru aghaghi iyi ka o gha adighi nma. Akara akara dị iche iche bụ ihe a na-ahụkarị, agbanyeghị, akụkụ ọ bụla kwesịrị ịdị na-enyo ọzọ. Egbugbere ọnụ kwesịrị ịbụ oji ma e wezụga n’ihe banyere nkịta na-acha uhie uhie, mgbe ahụ egbugbere ọnụ nwere ike ịbụ chocolate.
AJ DIS: Otu akwa ọcha. Ihe akara ọ bụla na uwe ahụ nke na-enweghị akara. Nkịta nke agba ọ bụla siri ike nke na-enweghị nkpuchi na / ma ọ bụ enweghị agba dị iche na ụkwụ na n'okpuru mkpụbelata ma e wezụga nkịta ọcha nke ga-abụ ude na-acha ọcha ma ọ bụghị albino.
O doro anya na ọdịiche dị iche iche ebe ọ bụla na uwe ahụ (na-abụghị karịa anya, ọkụ n'etiti ọkpọiso ma ọ bụ ihe mkpuchi na isi ọcha na njedebe ọdụ).
Uwe nke Klee Kai dị okpukpu abụọ ma ọ bụ ọkara n'ogologo ọ bụ ezie na Klee Kai nwere ogologo ntutu na-anabata ya nke ọma, na-enye ọdịdị dị mma nke ọma, mana ọ dịbeghị ogologo oge iji kpughee atụmatụ nkịta dị ọcha.
Uwe mkpuchi ahụ dị nro ma sie ike ma nwee ogologo zuru ezu iji kwado uwe mpụta. Ntutu ntutu nke uwe elu na-akwụ ọtọ ma na-adịtụ nwayọ-na-adaghị adaba ma ọ bụ na-eguzo ọtọ site na ahụ. Ekwesiri ighota na enweghi mkpuchi n'okpuru oge igbaputa bu ihe kwesiri.
A na-ekwe ka ịkpụ afụ ọnụ nke aka na n'etiti mkpịsị ụkwụ gosipụta ọdịdị dị mma. A gaghị anabata nsị nke ajị anụ n'akụkụ ọ bụla ọzọ nke nkịta ahụ ma kwesiri ịta ya ezigbo ahụhụ.
Emehie: Uwe dị ogologo, nke siri ike ma ọ bụ nke na-adịghị mma, ụdị dị oke njọ ma ọ bụ nke dị larịị, uwe ahụ bụ iji kpuchie ụdị nkịta ahụ na idozi uwe ahụ, belụsọ ka enyere ya n'elu.
Iwe - Omume njirimara bụ enyi ma na-echebe ókèala na ezinụlọ, mana ọ na-adị njikere ma na-apụ apụ mgbe ebutere ya, na-akwụ ndị ọbịa ala ọzọ ma na-eme ihe ike megide ndị na-emebi iwu ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ anụmanụ.
Ọ na-agbachitere ya na nkịta ndị ọzọ. Iguzosi ike n'ihe ya na ọdịdị ịhụnanya ya mere ka ọ bụrụ ezigbo enyi.
Olu - Ọkara n'ogologo, nke ahụ bụ ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ogologo ahụ, na-agbatị ma jiri nganga kwụọ mgbe nkịta na-eguzo. Mgbe ị na-agagharị na trot, a na-agbatị olu ya ka isi buru ntakịrị n'ihu.
Emehie: Olu ma dị mkpụmkpụ ma sie ike; olu ogologo.
Ubu - Ubu ubu na-eme nke ọma azụ n’akuku nke ihe dị ka ogo 45 n’ala. Ngwurugwu nke elu dị ntakịrị azụ site na ubu na ubu ma ọ dighi n'akụkụ ala.
Mkpụrụ ahụ na akwara ndị ji ubu n’aka agịga ma kwụsie ike.
Emehie: Ubu kwụ ọtọ; rụrụ ubu.
Igbe Ihe omimi di ike ma sie ike nke oma ma obughi obosara, ya na ebe kachasi ike di na azu ma di elu karie aka na ọkara nke anya site na nkpuru ala.
Ọkpụkpụ ahụ na-esi na spain pụta mana ọ dị ntakịrị karịa ikpere aka ruo ọkara nke anya site na akpọnwụ n'ala. Ọkpụkpụ ahụ na-esite n'ọkpụkpụ azụ ma jiri nwayọọ gbaa ya gburugburu.
Emehie: Obi akwara sara mbara, “ọgịrịga gbọmgbọm,” ọgịrịga ya adịghị oke ma ọ bụ ghara ịdị ike.
Azụ - Azụ kwụ ọtọ na ọkwa nwere ọkwa larịị site na nkụ wee croup. Ogologo nke ahụ site na sternum ruo buttocks bụ anụ ọhịa ma ọ bụ abụọ karịa ogologo ka akpọnwụ n'ala. O nwere ike ọ gaghị abụ ihe nkpuchi ma ọ bụ slack ịbụ ogologo oge n'ime ahụ.
Kwụ a na-ada n’azụ, na-adịtụ warara karịa ọgịga ahụ ma jiri obere nsị. Ihe otu a siri n'ọkpụkpụ azụ rute na akuku, mana ọ dịtụghị oke iji gbochie nsụgharị azụ nke ụkwụ azụ. Na profaịlụ, ọ bụ nke ọkara ogologo na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịdị.
Emehie: Na-adịghị ike ma ọ bụ slack azụ; ghachia azụ; sloping topline.
Skwụ na ụkwụ
Ochie - Mgbe ị na-eguzo ma na-ele anya site n'ihu, a na-agbatị ụkwụ n'ogologo, na-adaba ma kwụ ọtọ, na ikiaka dị nso na ahụ ma ghara ịbanye ma ọ bụ pụọ. Elere anya n'akụkụ, a na-atụnye paspọtụ ntakịrị, ya na nkwonkwo pasent siri ike, mana na-agbanwe agbanwe.
Ọkpụkpụ dị ọkpụrụkpụ mana ọ dịghị arọ ma ọ bụ na-emebi emebi. Ogologo ụkwụ site n’ikpere aka ruo na ala bụ ọkara ma ọ bụ obere ihe na-erughị ọkara anya site na akpọnwụ n’ala na-emehie nanị obere ka ọ dị na ụkwụ.
Enwere ike wepu nkwupụta ụkwụ na ụkwụ ụkwụ.
Emehie: Emere umu aturu na-esighi ike, ọkpụkpụ siri ike; oke warara ma ọ bụ oke obosara na ihu; ikiaka abanye ma ọ bụ pụta. Ọkpụkpụ dị obere ma na-emebi emebi na-ele anya iji mebie ihe nketa nke Siberia Husky. Na-emebiga ihe ókè n'ogologo ụkwụ ka ọ dị ka stilts.
Quarterslọ Ọrụ - Mgbe ị na-eguzo ma na-ele anya n'azụ, a na-eji ụkwụ na-aga ụkwụ na ụkwụ. A na-eme ka apata ụkwụ dị elu nke ọma, a na-ehulata ihe ahụ, a na-akọwapụta hock nke ọma ma debe ala. A ga-ewepụ mkpesa (ma ọ bụrụ na ọ bụla).
Ihe osise zuru oke nke azụ dị n'azụ kwesịrị igosipụta ike dị ka Klee Kai bụ nke e mepụtara site na ụdị arụ ọrụ nke mpaghara Arctic.
Emehie: Oke warara ma ọ bụ oke obosara na azụ.
Nnukwu mmejọ: Nnennen stifles na ehi hocks.
--Kwụ - Oval na ọdịdị, ma ọ bụghị ogologo oge. Thekwụ ndị ahụ pere mpe ma ọ bụghị na-emebi emebi na-ele ha anya, kọmpat ma dịkwa nkọ nke ọma n'etiti mkpịsị ụkwụ na mpe mpe akwa. Pad ndị ahụ siri ike ma sie ike. Mkpịsị aka na-atụgharị ma ọ bụ pụta mgbe nkịta nọ n'ọnọdụ nkịtị.
Emehie: Mkpụrụ ụkwụ dị nro ma ọ bụ nke agbapụrụ agbaji, ụkwụ ukwu buru ibu ma na-eme mkpumkpu, ụkwụ na-emebi emebi, na-abanye ma ọ bụ na-apụta.
Ọdụ - The ọdụ kwesịrị moderately ogologo na ọdụ ọdụ kwụsịtụ dịtụ ogologo karịa hock mgbe ala, ma ọ dịkarịa ala ogologo iji gbasaa azụ ma ka na-emetụ azụ. Ekwesịrị iji ntutu dị ogologo kpuchie ya nke ọma.
Emehie: A ọdụ na ọkọlọtọ naanị.
Mkpụrụ akwụkwọ - Dogsmụ nkịta nwoke ga-enwerịrị, ma nwee ike ijigide mkpụrụ amụ abụọ n'ime akpa ahụ ọ gwụla ma enwere ọghọm na-eme ka nkịta tufuo otu ma ọ bụ karịa. Eziokwu ga-abụrịrị onye Vet dere ya.
Emehie: Nko okpukpu abuo ma obu itinye akwa n’elu azu. Onye ọka ikpe kwesịrị ịhụ ọdụ ahụ azụ ma ọ dịkarịa ala otu oge n'oge asọmpi.
AJ DIS: Ọdụ na-adịghị ogologo iji gbagoo iji metụ azụ ahụ.
Gait - Ihe e ji mara Klee Kai bụ prancing ma ọ bụ ele. A na-ebu ihu aka na ụkwụ n'azụ, n'etegharịghị aka ma ọ bụ n'apata ụkwụ. Ezie na nkịta na-echere, topline na-anọgide ike na larịị.
Emehie: Lumbering ma ọ bụ mpịgharị gait; ịgafe, ma ọ bụ nshịkọ.
Njirimara ụdịdị kachasị mkpa na Klee Kai bụ ihe egwuregwu ụmụaka iji buru ibu, na-eme nnukwu ụlọ na nkịta nkịta, obere ọkpụkpụ dị mma, ịdị mfe na nnwere onwe ịgagharị, uwe kwesịrị ekwesị, isi na ntị na-atọ ụtọ. oge igwu egwu, nkịta ọhịa yiri nkịta ọhịa, omume nwere ọgụgụ isi na ezi ọnọdụ ezinụlọ.
Ọdịdị ọ bụla nke oke ọkpụkpụ ma ọ bụ ibu ibu, ịkpa aka ma ọ bụ nke na-adịghị mma, ma ọ bụ ogologo, uwe na-adịghị mma kwesịrị ịta ya ahụhụ. N'ime nwoke na nwanyị, Klee Kai na-egosi na ọ na-adị ngwa ma ọ bụghị dị mfe ma na-emebi emebi dị ka ị na-atụ aro anụmanụ na-agba ọsọ.
Ọ bụ dinta; nnụnụ, squirrel, oke, wdg ma nwee ọgụgụ isi iji merie adịghị ike ọ bụla dịka nha, ọsọ, wdg.
Na mgbakwunye na mmejọ ndị a kwurula, mmebi iwu doro anya nke ụdị anụ ọhịa niile na-adịghị mma na Klee Kai dị ka ụdị ọ bụla ọzọ, agbanyeghị na akpọghị ha aha ebe a.
PUPIES: A na-ekpe ụmụ nkịta ikpe dị ka ụkpụrụ ndị okenye si dị. Ọ gwụla ma pup ahụ bụ oji na ọcha, ekwesiri iburu n'uche na ụmụ nkita Klee Kai enweghị agba okenye ha ruo ihe dị ka ọnwa isii.
Njupụta nke uwe ahụ abụghị nke okenye maka ihe dịka otu afọ. Mgbe ụfọdụ agba dị n'okpuru anya ga-egosi ihe ruru otu afọ. Nwa nkita nwere ike gbanwee nke ukwuu mgbe akwa ndị okenye na-abata.
Ihe nkpuchi; Otú ọ dị, kwesịrị ịnọ ebe dị anya. Pumụ nkịta nwere ụmụ nwoke ga-enwe amụ nwa n’ime akpa akwa tupu ọnwa isii agafee.
Top 53 Ọtụtụ ezigbo Ado Corgi
Obere umu, nnukwu ihunanya: ihe nile banyere Chipin Dog
ụmụ nkịta labrador na German
ọnụ ahịa nwa nkịta French bulldog
ọkara labrador ọkara ọlaedo retriever
onye ọzụzụ atụrụ Ọstrelia siberian husky mix